Irizothi kaJean-Michel Cousteau, eFiji ngoku yamkela iindwendwe eziBuyayo, ziphinde zavuleleka kwihlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziyiFiji » Irizothi kaJean-Michel Cousteau, eFiji ngoku yamkela iindwendwe eziBuyayo, ziphinde zavuleleka kwihlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziyiFiji • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Irizothi kaJean-Michel Cousteau
IJean-Michel Cousteau Resort, eFiji, inkulumbuso ye-eco-adventure yokuya eSouth Pacific, ikulungele ukwamkela iindwendwe zayo zokuqala emva kweenyanga zivaliwe kubahambi bamanye amazwe, ngenxa yobhubhane. Ibekwe kwindawo ekhethekileyo, echumileyo yetropiki kwisiqithi saseVanua Levu esibheke kumanzi azolileyo aseSavusavu Bay, iJean-Michel Cousteau Resort yindawo yokubalekela izibini, iintsapho, kunye nabahambi abanengqiqo abafuna ukuphumla, ukonwabisa, kunye nokuhlaziya kwakhona ubunewunewu emva kweenyanga zokuhlala kufutshane nasekhaya.
IFiji ilindele ukuphinda ivulekele kubahambi bamanye amazwe (kubandakanya abahambi abavela e-USA) ukuqala ngo-Novemba.
Indawo yokuhlala i-Eco-luxury kwiVanua Levu Island eSouth Pacific inikezela ngeziganeko ezizodwa kunye namava.
Abasebenzi beholide bayagonywa ngokupheleleyo, baqeqeshwe, kwaye bazimisele ukugqitha kwelona nqanaba liphezulu le-COVID-19 yokhuseleko kunye nemigangatho yezococeko.
Ukuvulwa okulindelweyo kulandela iindaba zokuba iFiji ilindele ukuphinda ivuleke kubahambi bamanye amazwe (kubandakanya abahambi abavela e-USA) ukuqala ngo-Novemba no Qantas izakuqala inkonzo evela e-Australia ngoDisemba. Iindwendwe ezinomdla e-US zinokubhukisha indawo ngokubiza (800) 246-3454 okanye nge-imeyile [imeyile ikhuselwe], kunye neendwendwe ezivela e-Australia zinokubhukisha ngokufowunela (1300) 306-171 okanye nge-imeyile [imeyile ikhuselwe].
"Siyavuya ukwamkela iindwendwe zethu kunye nabahlobo bethu kwiJean-Michel Cousteau Resort," utshilo uBartholomew Simpson, uMphathi Jikelele we Indawo kaJean-Michel Cousteau, eFiji. “Asinakulinda ukubona uvuyo ebusweni babo nokuva ukuhleka njengoko baphinda batyelela isiqithi sethu ukuze bonwabele kwaye baphonononge imimangaliso yendalo emangalisayo yendawo esiya kuyo eMzantsi Pacific. Ngeli xesha lingenakuthelekiswa nanto kwimbali yethu, abasebenzi bethu basebenza ngokungakhathali ukugcina ubuhle bepropathi ngelixa begcina ukuzibophelela kwethu kwindalo esingqongileyo. Sizimisele ukondla iindwendwe zethu ngeholide ekhumbulekayo. ”
Iindwendwe ezibuyayo kunye nabafuna ukuzonwabisa abatsha baya kuba nethuba lokulala kwiziko laseFiji eliyinyani, ungene emanzini awona mahle kakhulu emhlabeni, uphumle kamnandi kwaye ujonge le ndawo nge-kayak yolwandle, okanye ubalekele kwisiqithi sabucala kwipikniki . Iindwendwe zinokundwendwela ii-mangrove, ifama yeeperile, ilali yaseFiji eyiyo, okanye ukunyuka ngehlathi elinemvula kwaye ufumane impophoma efihliweyo.
Abakhenkethi abancinci bayothuswa kukutyelelwa yi-Bula Club, iklabhu yabantwana abaphumelele amabhaso, apho baya kuchitha khona iintsuku zabo behlola kwaye befunda ngehlabathi elibajikelezileyo ngemidlalo nangaphandle. Abantwana abaneminyaka emi-5 nangaphantsi babelwe i-nanny yabo ixesha lokuhlala kwabo; kwaye abantwana abaneminyaka emi-6 ukuya kweli-12 bajoyina amaqela amancinci akhokelwa ngumhlobo.
The Irizothi kaJean-Michel Cousteau Abasebenzi bagonyiwe ngokupheleleyo, baqeqeshiwe kwaye bazimisele ukugqitha kwelona nqanaba liphezulu le-COVID-19 yokhuseleko kunye nemigangatho yezococeko ngelixa babonelela ngenkonzo yobungcali kunye nokwamkela abathengi. Abasebenzi baya kubulisa iindwendwe ngokugquma ubuso, kwaye kwezinye iimeko iiglavu, ngelixa beqinisekisa ukudideka ngokwasentlalweni nasemzimbeni. Ukongeza, zonke iindawo ekubanjiswa kuzo ziya kucocwa kwaye zicocwe rhoqo.
Ukongeza, uKhenketho iFiji kutsha nje lenze "Ukuzibophelela kwiFiji, ”Inkqubo ebonisa ukhuseleko oluphuculweyo, iinkqubo zempilo nezempilo kwilizwe elisemva kwesifo njengoko ilizwe lilungiselela ukuvula imida kubahambi. Inkqubo, eyilelwe ukunceda ukunciphisa ukusasazeka kwe-COVID-19, yamkelwe ngaphezulu kwama-200 eendawo ekuchithelwa kuzo iiholide, abaqhubi babakhenkethi, iivenkile zokutyela, iindawo ezinomtsalane kunye nokunye.
Iindwendwe zinokubhukisha ngo "xolo lwengqondo" njengoko indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ibonelela ngokuguquguquka okongezelelekileyo kunye nokulungela konke ukubhukisha okutsha. Indawo yokuphumla idale "iXesha laSimahla lediphozithi" kude kube ziintsuku ezingama-30 emva kokuvulwa kwakhona komda phakathi kweFiji nelizwe lakho lokuhlala, iinkcukacha ezipheleleyo ziyafumaneka Apha.
Ukubhukisha kunye nolwazi oluthe vetshe ngeJean-Michel Cousteau Resort, nceda undwendwele khangekhadi.com.
Malunga neJean-Michel Cousteau Resort
I-Jean-Michel Cousteau Resort ephumeleleyo yenye yezona ndawo zidumileyo zokuya eholideyini eMzantsi Pacific. Ifumaneka kwisiqithi saseVanua Levu kwaye yakhiwe kwiihektare ezili-17 zomhlaba, indawo yokutyela ejonge kumanzi oxolo aseSavusavu Bay kwaye inika indawo yokubalekela izibini ezitshatileyo, iintsapho, kunye nabahambi abaqondayo abafuna uhambo olunamava oluhamba kunye nokunethezeka okwenyani kunye nenkcubeko yendawo. IJean-Michel Cousteau Resort ibonelela ngamava angalibalekiyo eeholide athathwe kubuhle bendalo yesi siqithi, ingqalelo yomntu kunye nobushushu babasebenzi. Indawo enoxanduva lokusingqongileyo kunye noluntu ibonelela iindwendwe ngezinto ezahlukeneyo, kubandakanya ngokukodwa ezenziwe ngophahla lwengca, indawo yokutyela ekumgangatho wehlabathi, ulungelelwaniso lwezinto zokuzonwabisa, amava endalo angenakuthelekiswa nanto, kunye noluhlu lwezinto zokuphefumla eziphefumlelweyo zaseFiji. khangekhadi.com
Malunga neCanyon Equity LLC
IQela leeNkampani zeCanyon, elinabanikazi beholide, elizinze eLarkspur, eCalifornia, lasekwa ngoMeyi ka-2005. Imantra yayo yayikukufumana nokuphuhlisa iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezincinane ezinamagama anqabileyo kwiindawo ezinomtsalane kwiindawo ezinamakhaya amancinci ezenza ukuba kube nokuqonda kodwa kuhambelane kakhulu. zoluntu kwindawo nganye. Ukusukela ukuyilwa kwayo ngo-2005 iCanyon yenze ipotifoliyo encomekayo yeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide, kwiindawo ezisusela kumanzi aluhlaza aseFiji, ukuya kwiincopho eziphakamileyo zeYellowstone, ukuya kwiikholoni zegcisa laseSanta Fe, nakwiiCanyons ezisemazantsi e-Utah.
Ipotifoliyo yeQela leCanyon ineepropathi ezinjenge-Amangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), Irizothi ye-Four Seasons Rancho Encantado (iSanta Fe, iNew Mexico), iJean-Michel Cousteau Resort (iFiji), kunye neDunton Hot Springs, (eDunton , EColorado). Ezinye izinto ezothusayo ziyaqhubeka kwiindawo ezinje ngePapagayo Peninsula, Costa Rica, kunye ne-Hacienda eneminyaka engama-400 ubudala eMexico, zonke ezimiselwe ukwenza iingxelo ezinkulu kwintengiso ye-niche yokuhambahamba kwamazwe aphesheya kwezolonwabo njengoko nganye iphehlelelwa. . yenycity.com